Kuwani waa noocyada ay adeegsadaan naqshadeeyayaasha bilowga ugu wanaagsan | Abuurista khadka tooska ah
Laga soo bilaabo Icons8 waxay sameysay daraasad muujineysa noocyada ugu badan ee la isticmaalo iyo maxay yihiin iskudhafka ugu wax ku oolka badan ee soo saaraya fariin cad oo akhristaha degel ama bog. Gunno ahaan, waxay sidoo kale muujineysaa in nashqadeeyayaashu ay xilligan la socdaan isbeddellada iyo tilmaamaha aan u fahamnay inay tahay wax la raaco.
By the way, ma rabno inaad ilowdo qaar ka mid ah qoraaladayada qoraallada xiisaha weyn u leh si ay ula socdaan hadba qaabka hadda jira. Maanta, in ka badan sidii hore, ayaa adeegsiga ilo kala duwan isla shabakada awood u leh inuu go'aamiyo qaab cad oo waafaqsan mawduuca ugu muhiimsan ee goobta.
Sawirada 8 ayaa soo maray 967 degel si loo helo 2.343 nooc oo la isticmaalay oo 500 ka mid ahi ay yihiin kuwo gaar ah. Waa in la sheegaa in noocyada Google ay weli yihiin kuwa ugu caansan iyo, si xiiso leh, magacyada noocyada badiyaa khalad ayaa loo qoraa.
Qaar ka mid ah ilaha ugu caansan ama caanka ah ee aan ka helno Fur sans, Robot, Lato iyo Montserrat. Qodob kale oo maskaxda lagu hayo waa in naqshadeeyayaasha bilowga ugu fiican aysan adeegsan noocyada casriga. Taabadalkeed, waxay doorbidaan inay dib ugu laabtaan noocyada fanka ee aadka u dhisan, sida Google Fonts.
Iyo furayaasha Daraasadda waxaa ugu muhiimsan:
Nidaamka xarfaha ayaa si ballaaran loo isticmaalaa.
Google Fonts si ballaaran ayaa loo isticmaalaa
Se waxay adeegsadaan astaamo badan laga soo xigtay ilaha.
Ma jiro degel adeegsada Comic Sans.
Halkan waa inaad haysataa xiriirka daraasadda la sameeyay by Daandii Haqaa Shanta nooc ee ugu caansan ayaan helnaa Helvetica Neue, oo badanaa lagu daro Menlo; Menlo, taas oo iyana ku lammaaneysa Open Sans ama Helvetica Neue; Open Sans, oo si wanaagsan ula dhacsan Roboto, Helvetica Neue iyo Roboto; Roboto, oo loo arko inuu si joogto ah ugu lamaanan yahay Helvetica Neue iyo Menlo iyo sidoo kale Lato iyo Product Sans; iyo Segoe UI, oo lagu arki karo Open Sans, Helvetica Neure ama Georgia.
Daraasad xiiso badan taas oo aan ku dhiirrigelin karno si loo doorto font kaas oo lagu siinayo qaabab badan iyo xoog mawduuca ugu weyn ee degelkeenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Daraasad ayaa muujineysa noocyada ugu isticmaalka badan iyo iskudhafka saamaynta ugu weyn ku leh degellada websaydhka
Waxaad ku dhadhamin doontaa shaashaddan Faransiiska ah